स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: February 2013
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 9:18 PM2comments
उपहारको महत्व त्यसको मुल्यले निर्धारण गर्दैन, बरु त्यससँग जोडीएको सच्चा भावनाले र न्यानोपनले गर्छ। केही दिन अघि यस्तै अमूल्य उपहार पाइयो। खुसी लाग्यो। उनी लगभग ३ हप्ता वार्डमा बसिन्, उनको फोक्सोको बाहिर हावा जमेको 'न्युमोथोराक्स(Pneumothorax)' भएकोले उपचारको छातिमा पाइप (Chest tube) हालिएको थियो। निको भएर जानुभन्दा अघि "तपाईंहरुको हार्डवर्क र इफोर्टले गर्दा नै म यति छिटो ठिक भएको हुँ, थ्याङ्क यु" भन्दै यो चकलेट उपहार दिएकी थिइन्।
कहिलेकाहीं भए पनि पाइने यस्तो 'धन्यवाद' र 'आत्मीयताको उपहार'ले हामी जे गरिरहेको छौं त्यो गरिरहन ठूलो प्रोत्साहन मिल्दो रहेछ।
उपहारको लागि धन्यवाद।।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 6:50 PM 16 comments
रातको लगभग साढे १ बजेको थियो। आफू आराम गर्नु भन्दा अघि इमर्जेन्सीबाट भर्ना गरिएका विरामी वार्डमा पुगिसकेपछि कस्तो अवस्था छ बुझौं भनेर वार्डमा गएको थिएँ। विरामीको पल्स (नाडीको चाल), प्रेसर ठिकै थियो। साँसको समस्या अलि कम भएर विरामी सुस्ताउन लागेका थिए।
"सबै ठिकै छ हैन त" भनेर के सोधेको थिएँ लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्या जस्तो पो भयो। "केइ नि ठिक छैन, यस्तो नि क्याविन हुन्छ, नाम मात्रको क्याविन, न राम्रो ओढ्ने ओछ्याउने छ, न कुरुवालाई सुत्ने व्यवस्था छ, न त तातो पानी छ, राजधानीको अस्पतालको क्याविनको चाला यस्तै हो, नाम मात्रको टिचिङ अस्पताल रहेछ।" म त ट्वा परें। दिनको ५०० रुपैंयाको क्याविनमा बसेको छ, सुविधा भने फाइभ स्टार होटलको जस्तो पो खोज्ने, के भन्नु खै त्यस्तालाई। "५०० रुपैंयामा ५००० को सुविधा खोजेर कहाँ पाइन्छ, दाम अनुसारको सुविधा हुन्छ, यो अस्पताल हो होटल होइन" भनेर मुखभरी जवाफ दिन मन लाग्याथ्यो। तर रातको २ बजे के विरामीसँग किचकिच गर्नु भनेर "पहिले कहिले टिचिङ अस्पतालमा भर्ना हुनुभ'को थिएन कि क्या हो?" मात्रै भनेर फर्किएँ।
उनले त्यो डायलग भन्दा म भने भर्खरै इमर्जेन्सीमा छोडेर आएको अर्को विरामीलाई सम्झिरहेको थिएँ। पैसा नभएर डायलाइसिस गर्न नपाई इमर्जेन्सीमै स्वाँस्वाँ गरेर बसीरहेको त्यो विरामीको पो झल्झली याद आयो। जो जनरल बेड नपाएर भर्ना पनि हुन नसकी "बरु यतै इमर्जेन्सीमै बस्छु" भनेर बसेको थियो। इमर्जेन्सी सेवा, सबै खाले इमर्जेन्सी उपचार त नि:शुल्क हुनुपर्ने हो नि। मान्छेको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार पनि पैसामा गएर अड्किदोरहेछ। कस्तो चित्तै नबुझ्ने कुरा।
कोही भने क्याविनमा बस्न पाएर पनि सन्तुष्ट हुन सक्या छैनन् कोही भने पैसाको अभावमा बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट पनि बन्चित छन्। "कोही धनी असाध्यै कोही गरिब माग्ने, सन्तान थरीथरीका" भन्या यही होला। "नेपाल आमाका सन्तान थरीथरीका" भन्या यही होला।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 6:32 PM3comments
"अस्पतालले दियो ५० लाख क्षतिपूर्ति"
यो खबर सुन्दा धेरैलाई "ए, अस्पतालले, डाक्टरले गल्ति गरेछ, विरामी मरेछ अनि जरिवाना तिरेछ, कति धेरै तिरेछ त" भन्ने मात्रै लाग्न सक्छ।
यसलाई अलि गहिरिएर हेर्दा मैले चाँही दुईटा कुराहरु देखें।
एउटा अस्पतालको गल्ति: अस्पतालले क्षतिपूर्ति भनेर त्यत्रो रकम दिएको छ तर 'डाक्टर वा अस्पतालको तर्फबाट गल्ति भएको' भनेर चाँही स्विकारेको छैन। त्यसो भए त्यो रकम विरामीका आफन्तलाई किन दिएको त? सहानुभुति स्वरुप? वा तोडफोडमा उर्लेर आएको भीडलाई शान्त गराउनलाई मात्र? खोई मैले त बुझ्न सकिन। यदी गल्ति भएको हो र गल्तिका कारण विरामीले ज्यान गुमाउनु परेको हो र त्यसैको क्षतिपूर्तिका लागि जरिवाना दिएको हो भने अस्पतालले, डाक्टरले गल्ति पनि स्विकार्न सक्नुपर्यो, अनि पो जरिवाना दिएको पनि मतलव हुन्छ। हैन भने भीडलाई शान्त बनाउन मात्र दिइएका यस्ता केही रकमले तत्काललाई त फाइदा नै होला तर भीडको शक्तिले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गलत सोचाइले फस्टाउने मौका पाउँछ। साथै "लापरवाही, गल्ति नगरेको भए त्यत्रो क्षतिपूर्ति किन दियो त" भनेर अस्पताल र डाक्टरको विश्वसनीयतामा पनि शंका उब्जाउछ।
अर्को चाँही विरामीको आफन्तहरुका कुरा। विरामीको मृत्युमा अस्पताल वा उपचाररत डाक्टर वा अरु कसैको लापरवाही देख्नु आजभोलि स्वाभाविक हुदैं गएको छ र त्यसका वापत क्षतिपूर्तिको माग पनि। तर यहाँ अस्पतालले गल्ति, लापरवाही नस्विकारीकन दिएको रकम चुपचाप लिनुले उनीहरुको सोचाइ माथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अस्पतालले आफ्नो तर्फबाट भएको गल्ति स्विकारेको छैन भने के का लागि त्यत्रो पैसा दिइरहेको छ भन्ने उनीहरुले पनि सोच्नुपर्थ्यो। कि त्यो अस्पतालले हरेक विरामीको मृत्युमा सहानुभुतिका लागि रकम बाढ्दै बस्छ? यसले विरामीका आफन्तको विरामीको उपचारमा भएको लापरवाही र त्यसका कारणले भएको मृत्यु (यदी भएकै रहेछ भने) प्रति न्यायको अपेक्षाभन्दा पनि क्षतिपूर्तिको रकमसँगको मोह बढि रहेछ भन्ने देखाउँछ। सिधै भन्दा नमिठो सुनिएला तर हिजोआज यस्तो प्रवृति मौलाईरहेको पाईन्छ।
यस्ता घटनाहरु हिजोआज हाम्रो समाजमा धेरै नै बढेर गएका छन्। अस्पतालको जुन कुनै मृत्युलाई पनि डाक्टरको लापरवाहीको नाम दिएर शक्तिका साथ मैदानमा उत्रने र न्यायको लागि भन्दा पनि क्षतिपूर्तिको लागि दवाव दिने। धेरैले क्षतिपूर्तिको रकम पाइरहेका छन् तर थोरैमा मात्र अस्पताल र डाक्टरले गल्ति स्विकारेका छन् र त्यस्ता घटनाको निर्क्योल नै नभै टुङ्याइएका छन्। न्याय दिलाउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने यो एकदम गलत परम्परा हो। यो कानुनीरुपमा हुनुपर्नेमा हाम्रोमा कानुनको कमजोरीका कारण कानुनलाई बाइपास गरिदैंछ। यस्ता घटनाहरुको छिनोफानो लगाउनका लागि राम्रो र भरपर्दो कानुन नबनेसम्म न डाक्टर, अस्पतालको साँच्चै लापरवाही भएको थियो भनेर उनीहरुलाई कारवाही हुन्छ न त विरामीका आफन्तहरुले लगाएको दोष मात्र थियो भनेर त्यस्तालाई निरुत्साहित पारिन्छ। अनि भीडको दबाबमा जे पनि गर्न सकिने भन्ने गलत नजिर बस्न जान्छ। अत: सम्बन्धित सबैले यसका बारेमा बेलैमा सोच्ने की?
नोट: यो लेख 'कसैको गल्ती थियो' भनेर दोश दिन वा 'कसैको गल्ती थिएन' भनेर बचाउ गर्न लेखिएको हैन। यहाँ व्यक्तिको भन्दा पनि गलत प्रवृतिको विरोध गरिएको हो।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 5:19 PM 11 comments
Labels: kantipur, मनका कुराहरु